admin . admin, Author at ပညာ ပါဝါ - Page2of 4
Author: admin . admin
admin . admin | 23/03/2022
ဇာတိမြေမှာ အလှူလုပ်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေ တင်ပေးလာတာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အချစ်ပိုနေရတဲ့ ဖြူဖြူထွေး.. ဖြူဖြူထွေးကတော့ အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ အနု ပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ပရိသ တ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့သူပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပြီး ချစ်စရာကောင်း အမူအကျင့်လေးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ တဖြည်းဖြည်းပိုမိုအောင်မြင်နေတာပါ ။ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်
ရွှေသင်္ကန်းပေါင်း ၁၇၀၀၀ နဲ့ သိန်း (၃၀၀) နီးပါးရှိတဲ့ အလှူလေးကို တောင်ကြီးမြို့မှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီထက်ထက်မိုးဦး..
ရွှေသင်္ကန်းပေါင်း ၁၇၀၀၀ နဲ့ သိန်း (၃၀၀) နီးပါးရှိတဲ့ အလှူလေးကို တောင်ကြီးမြို့မှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီထက်ထက်မိုးဦး.. အကယ်ဒမီမင်းသမီးထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တစ်ခေတ်မှာ ထက်ထက်မိုးဦးခေတ်ရယ်လို့ နာမည်တွင်ခဲ့ပြီး ကြော်ငြာဘုရင်မလို့လည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အခိုင်အမာနေရာယူထားနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းထူးချွန်တဲ့ သူမကတော့ အကယ်ဒမီဆုတွေကို
မိန်းမချင်းတောင် အားကျယူရတဲ့အထိ နုပျိုလှပမှုတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ယောဂလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးများ..
admin . admin | 22/03/2022
မိန်းမချင်းတောင် အားကျယူရတဲ့အထိ နုပျိုလှပမှုတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ယောဂလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးများ.. ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာနာမည်ပျက်မရှိတဲ့အကယ်ဒမီမင်းသမီး​ြကီးတစ်လက်ပါ။ အမြဲလိုလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စိတ်အေးချမ်းစွာ ဘဝကိုမိသားစုနဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေသူပါ။ မခိုင်လေးကတော့အခုလိုကာလမှာအနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားထားတာဖြစ်ပေမယ့်လည်း မခိုင်လေးကတော့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှသထက်လှအောင် နေထိုင်နေတဲ့သူပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်း အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နူပျိုလှပလွန်းတဲ့မခိုင်လေးကို အံ့သြချီးကျူးလျက်ရှိနေကြတာပါ။ လက်ရှိမှာလည်း ယောဂ ကစားနေတဲ့ဝတ်စုံလေးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ထပ်မံမျှဝေလာတဲ့အခါမှာတော့ မင်းသမီးတွေအချင်းချင်းတောင်ဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့်
ဝိတ်တွေချထားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကကွက်လေးကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်အားပိုနေကြတဲ့ ယွန်းနဒီလွင်မိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်…
ဝိတ်တွေချထားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကကွက်လေးကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်အားပိုနေကြတဲ့ ယွန်းနဒီလွင်မိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်… အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တစ်ချိန်ကအောင် မြင်မှုထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးလွင်မိုးကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်.. လွင်မိုးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး ခုချိန်မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့စီးပွား ရေးလုပ်ငန်း ရှင်တစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရနေပါပြီနော်… လွင်မိုးကတော့ အနုပညာမျိုးဆက်လေးဖြစ်တဲ့ သမီးဖြစ်သူ ယွန်းဝတီလွင်မိုး နဲ့အတူမြေးလေးဖြစ်သူ Liam လေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေကချစ်ခင်အားေ ပးနေကြတာ
ကွယ်လွန်သွားတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူမင်းသွေးအပေါ် ယနေ့ထိ သစ္စာရှိရှိလွမ်းဆွတ်သတိရနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသွေးချစ်သူကောင်မလေး.. ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်မင်းသွေးကွယ်လွန်သွားတာ (၃)နှစ်ကျော်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေက မင်းသွေးသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုအားပေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းသွေးရဲ့ချစ်သူလေးကလည်းဒီနေ့အချိန်ထိ မေ့လို့မရသေးဘဲအုပ်ဂူလေးမှာပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ထွက်သွားတဲ့မင်းသွေးအတွက်ဖြေမဆည့်နိုင်ဘဲ ဒီနေ့အချိန်ထိလွမ်းဆွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အလှူတွေပုံမှန်လုပ်ပေးနေပြီး ကောင်းရာမွန်ရာကနေသာဓုခေါ်ပေးဖို့လည်း မင်းသွေးချစ်သူလေးကဆုတောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ crd zawgyi ကြယ္လြန္သြားတာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သူမင္းေသြးအေပၚ ယေန႔ထိ သစၥာရွိရွိလြမ္းဆြတ္သတိရေနဆဲျဖစ္တဲ့ မင္းေသြးခ်စ္သူေကာင္မေလး.. ပရိသတ္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္မင္းေသြးကြယ္လြန္သြားတာ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ပရိသတ္ေတြက မင္းေသြးသ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကိုအားေပးေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါအျပင္မင္းေသြးရဲ႕ခ်စ္သူေလးကလည္းဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ေမ့လို႔မရေသးဘဲအုပ္ဂူေလးမွာပုံမွန္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
admin . admin | 21/03/2022
မိသားစုလိုက် အပန်းဖြေခရီးကို ဂျက်လေယာဉ် စင်းလုံးငှားပြီး ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်.. ချစ်ပရိသတ်ကြိးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး စမိုင်းလ် ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို အနည်းအကျဉ်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြည့်စုံပြီး သာယာတဲ့မိသားစု ဘဝလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားကျချစ် ခင်နေရတဲ့ ချစ်စရာမိသားစုလေးပါပဲ။
ရီဝေပြီးမှော်ဆန်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ ကော်ရုပ်လေးအလား လှပနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ပုံရိပ်လေးများ.. မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါက မော်ဒယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝကိုရပ်တည်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပြီး ပရိသတ်အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ နေရာတစ်ခုကိုအခိုင်မာရပ်တည်ထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဝင့်ဝါကတော့စိတ်သဘောထားပြည့်ဝပြီး အမြဲပျော်ရွှင်စွာနေတတ်တဲ့ ချစ်အမူအရာလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားပေးဝန်ရံခြင်းကို ခံနေရတာပါ။ ဒါ့အပြင် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုဇာတ်ရုပ်မျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝကျကျ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့
ကောင်လေးတယောက်နဲ့တွဲဆော့ထားတဲ့ Tiktok ဗီဒီယိုလေးကြောင့် ချစ်သူရနေပြီလားလို့ ပရိတ်သတ်တွေ မေးခွန်းထုတ်တာခံနေရတဲ့ မိတ်ကပ်လင်းလင်း… မိတ်ကပ်လောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်နေရတာကတော့ လင်းလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအလှဖန်တီးရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်းပျော်ရွှင်စွာနေတက်သူဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုအမြဲစနောက်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ချစ်နေရတာပါ။သူမကိုအားပေးချစ်ခင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း အပြင်မှာရော လူမှုကွန်ရက်မှာပါအများအပြားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ အငြိမ့်လေးတွေမှာပါပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့လည်း ပရိသတ်တွေခန့်မှန်းရခက်စေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေ video လေးတွေကိုတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ခုမှာလည်း ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ပွေ့ဖက်ထားတဲ့
admin . admin | 20/03/2022
G-Fatt ရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးဖြစ်တဲ့ Raido ဆိုတဲ့ MV လေးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာမို့ သူမကို အားပေးဝန်းရံကြဖို့ပရိတ်သတ်ကို တောင်းဆိုင်လိုက်တဲ သင်ဇာ.. ပရိသတ်ကြီးရေ သင်ဇာကတော့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ ညီမအရင်းပါ။ သင်ဇာကတော့ တက်သစ်စ မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးလေးဖြစ်ပေမယ့် တကယ့်ကို အနုပညာပါရမီပါတဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ cute type
ဇာတ်လမ်း ရိုက်ကွင်းတခုမှာ အနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်လေးတချို့တင်ပေးလာတဲ့ အလှမယ် သင်းသင်း…
ဇာတ်လမ်း ရိုက်ကွင်းတခုမှာ အနုပညာမောင်နှမတွေနဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်လေးတချို့တင်ပေးလာတဲ့ အလှမယ် သင်းသင်း… ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အလှမယ်သင်းသင်း ဆိုတာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုလောက်အောင် ပရိတ်သတ်တွေလည်း သိပြီသားဖြစ်ကြမှာပါ။ မင်းသား ဝေဠုကျော်နဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဝေဖန်မှုများစွာကို ခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ အလှမယ်သင်းသင်းက ပထမဆုံးအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီး အခုလို အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့အပေါ် “ ကြိုး….ဇာတ်ကားလေးမှာ ပါဝင်ခွင့်ရလို့အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။